Kai Ken inu bu onye nwe obodo, akara aka DeFi. Na ahia ọ bụla, ọrụ atọ dị mfe na-eme: Ọkụ, Nnweta LP, na mmepe. Site n'ụkpụrụ tokenomics a, a na-erite oru ahụ dum n'ogo ọ bụla. Ndị azụmahịa Kai ken baara ndị niile nwere ya uru.
Ihe ngosi a bu iji kwụghachi ndị na - ejide ya na ntaramahụhụ maka ndị na - ere ya. Maka azụmahịa ọ bụla, a na-etinye ụtụ isi ndị a:
Mgbe onye ọchụnta ego zụtara akara ahụ n'oge Ọha Ọha:
1% na-aga obere akpa ahịa
1% na-aga LP
1% na-aga ọkụ adreesị adreesị
2% na-aga ndị na-ejide ihe
Mgbe onye na-achụ ego na-ere akara ahụ n'oge Ọha Ọha:
2% - 7% na - aga ndị na - ejide ya dabere na ngọngọ nke ndị ahịa na - ere. Nkwekorita a ga-ekpebi otu Et ma wepu% nke na-aga ndị na-ejide ya.
Ihe 2% - 7% nke na-aga maka ndị na-ere ahịa ọ bụla na-ere bụ atụmatụ nke na-enweghị onye etinyere. Ihe omume a pụrụ iche ma bụrụ nke izizi iji hụ ihe ngosi a.
Atụmatụ na mmelite n'ọdịnihu:
Ugbo Nkita. Nke a ga-abụ ọdọ mmiri na-akọ ugbo LP. Kaiken INU nwere ike ijikọ ya na Eth, USDT na mkpụrụ ego ndị ọzọ kwụsiri ike iji kọọ karịa Kaiken INU. Kaiken INU ga-esonyekwa akara ndị ọzọ maka ịgbaso.
Glọ Nkịta. Glọ nkịta ga-abụ akara aka ọzọ amachi na mgbe ejikọtara ya na Kaiken Inu na Ugbo Nkịta, ọ ga-eme ka ike ịchụgharị okpukpu abụọ.
Puppy Puppy. Nke a ga - abụ akara aka ọzọ enwere ike nweta site na ịchụso Kaiken INU site na iji akara ndị ọzọ. Puppy puppy ndị a ga - abụ NFT ndị nwere ike ịre ahịa
Nri Dog. A ga-azụta nke a iji nye Puppy Puppy nri ka ha nwee ike ito ngwa ngwa.
Nkịta Dog. Nke a ga - abụ akara aka ọzọ nke ga - enye ndị na - eto eto crypto nri na - enye nri.
Ngwa KAI Eco. Nke a ga-abụ ngwa ọrụ gọọmentị nke ọrụ Kaiken Inu.
Ọnọdụ maka ọrịre:
Nrepu Onwe na $ 7 kwa ijeri 1.
-Ga ere na $ 10 kwa ijeri 1 site na dxsale.
Ọha Ọha na $ 12 kwa ijeri 1
% Nkesa. Nke a bara uru naanị n'oge ire ere ọhaneze, ọ bụghị ire ere na nkeonwe.
Ebumnuche anyị bụ ịchụkwudo Kishu na Shib Inu n'ihe gbasara ndị na-ejide ma na ahịa ahịa. Anyị na-eme obere nzọụkwụ.
Okporo ụzọ ICO
2021 Q3 1. Mbido mbu-nke
• Ntanetị weebụsaịtị
• Ntinye nkwekọrịta
• Social Media Akaụntụ Creation
• Ọrịre Onwe
• Ọha n'ihu ọha
• Ngwa CG
• Ngwa CMC
• Kai Eco obere akpa Development
• CEX (ndepụta 1-3)
• Mmepe Ugbo Nkịta
2021 Q4 2. Nchịkọta
• nkịta ebule nkịta
• CEX Listing (1-2 ndepụta)
• Social Media Influencers Marketingzụ ahịa
• nkịta ụlọ nkịta
• Melite Kai Eco obere akpa
2022 Q1 3. Uto
• Crypto puppy Development
• Nkịta Vitamin Development
• Nkịta Nkwalite Nri
• CEX Ndepụta (1 nke Top 5)
• Melite Kai obere akpa
2022 Q2 4. Mgbakọ
Etinye iberibe ahu nile n’ebe kwesiri ekwesi ma bido mebe KAI Ecosystem.
Enweta zuru ezu
1000 puku ijeri
300 puku ijeri
Ahịa ICO nkeonwe
200 puku ijeri
Chọrọ depụta ICO gị?
Depụta ICO gị taa na weebụsaịtị anyị ma ruru ọtụtụ puku ndị na-etinye ego na gburugburu ụwa yana, ugbu a, anyị na-enye ndị kachasị ọsọ Ọrụ KYC maka ICO. Dejupụta ụdị kọntaktị anyị taa ma anyị ga-akpọtụrụ gị n'ime awa 24 na-esote.